njani ukwenza loluntu womnatha - IVIDIYO INCOKO zwelonke! Onke amazwe, iinqwelo, lonke ihlabathi.
Oku kuza kuphunyezwe yakho entsha
Ngalo mzuzu, ithuba occupy isikhundla phakathi loluntu malunga ngathi zange favorableNje qinisekisa ukuba wena (Ewe, wena) sifana yesibini Durov okanye marko Zuckerberg ka-Facebook. Kulungile, ingavumi. Kunjalo okulungileyo, kodwa ufuna engathndwayo ukuba kuba ngabemi inani phakathi abenzi be loluntu malunga, ukuba wena musa landela icebiso ukususela kwixesha elidlulileyo amava. I-american car guru Henry Toyota xa wathi"Ukungaphumeleli kuphela ithuba begin asebenze ngaphezulu ngobulumko". Nangona ezi wise amazwi baba esebenzayo ye- eminyaka emva kokufa kwakhe, abanalo kakhulu ngokufanayo ne-loluntu networks. Masibe aqonde ukuba Umnu Chevrolet wayesazi absolutely nto malunga ne-Intanethi. Xa ufuna ukwenza i-zothungelwano loluntu kunye intentions babe a dominant nani kwi-Intanethi, kungcono ukuba balandele philosophy ka-Steve imisebenzi:"umyalelo abazobi ukuboleka, ezinkulu abazobi steal."Kanye Kanye Steve. Khawucinge nge-konke oku, singathi ukuze ulungele ukuqala uhambo lwakho ka-conquest niche loluntu networks, likhokelwa amava ka-edlulileyo conquerors.
Ndinqwenela ukuba unqwenela usenza okulungileyo comment, kodwa kubalulekile engathndwayo ukuba uza uncedo.
Ukuba ufuna ukulandela zilandelayo imiba, impumelelo yeyona inevitable. Amanyathelo building yakho zothungelwano loluntu: Isigaba: Ukuphuhlisa ingcamango wokuqala ngena kwi-ukwenza loluntu womnatha Wokuqala inyathelo lesi-ngakulo ukwenza eyona loluntu womnatha ngu ukuphuhlisa izimvo. Nangona kunjalo, phambi kokuba uqale ukufezekisa oku imbono, kufuneka balungiselele. Hlala esikolweni (College, yesikolo esiphakamileyo, iindlela zomzobo esikolweni, ingaba na umcimbi), njengoko kuya kuphela hinder kuwe. Okokuqala, briefly familiarize ngokwakho kunye imisebenzi wanikela yi-Facebook, kwaye kwangoko nzulu eziliqela ngempumelelo networks njenge"Amava kufutshane"ukwakha kwi kwabo. Ngaphezulu, ukuba yesibini iqonga. Inyathelo lesi Cinga igama yesibini ngena kwi-ekudalweni womnatha Apha uyakwazi yiya zimbini iindlela. Uyakwazi dibanisa u-incompatible amazwi (umz, Facebook).
Kodwa ungalibali ukuba iwebhusayithi igama kufuneka zichaza ngokucacileyo injongo yayo.
Eneneni, ngeli iqonga uyakwazi thintela kuphela yakho inquisitive engqondweni. Ukuba unayo akukho izimvo, zama ukukhetha phezulu iinjongo yakho igumbi, kwaye ubeke nabo kwi-isihloko. Ukuba le ndlela ayiyo kuwe, uyakwazi ukuza kutsho nge ngokupheleleyo meaningless ilizwi ukuba izandi ebalulekileyo. Olukhulu. Inyathelo lesi Ufumane nokulinga eyinkunzi Inyathelo lesi- xa ufuna ukwenza i-loluntu womnatha Ngoko ke, makhe bathethe malunga Ezemali. Bakhulise loluntu womnatha ukuba sele yenziwe nomdla resonance kulo mbutho uya iindleko kakhulu imali, kwaye ngaphandle, kukho phezulu kakhulu isenzo sempumelelo"tshisa". Musa worry, oko kukuthi kutheni iinkampani specializing kwi-nokulinga eyinkunzi, apho unako ukuba izakunika imali. Jonga efanayo iinkampani kwaye kwenza idinga nabo abo uza ifomu umphefumlo. Ngoku kuphela kufuneka iqwalasele kwishishini imodeli. Ke pretty elula. Kutheni kuyimfuneko. Kwinto yonke, ngenxa abatyali-mali rhoqo umsebenzi kwi old imodeli, rare mntu phakathi kwabo abantu abaqhelekileyo kunye vagaries ka-Internet. Kufuneka indlela ingqokelela yamanani, ushicilelo tshati kwaye ulwazi imizobo, ngokunjalo ukufunda i amanqaku.
Ungafuna ukusebenzisa kaninzi mimiselo njenge"web."okanye"lwezentlalo zephondo".
Oku kuya kukunceda ukuba qinisekisa kwabo ukuba uyayazi into nisolko uthetha malunga. Kanye yakho ntetho kugqityiwe, uyakwazi kunyikima izandla kunye abatyali-mali kwaye bathabatha imali. Inyathelo lesi Hire abasebenzi Xa ufumana financing, into yokuqala kufuneka senze ngu ukuqala abasebenzi. Ngoku ufuna omkhulu esifutshane, awunokwazi ukuchitha ixesha ngqo umsebenzi nkqubo.
Apha thina aren ayikwazi ukwenza into entsha, khumbula oku
Ngoko ke, ngubani ufuna hire. Apha iza eyona nxalenye - kunjalo, abahlobo bakho. Ezilungileyo kubekho inkqubela ukususela Ngezifundo.
Coordinator ka-nokuthengiswa Kwicandelo.
Le guy ngubani umsebenzisi phakathi iindidi ka-emvula umdlalo kwi computer yakho. Jikelele, ufumane i-unye. Kuba elihle intloko, musa xana okulungileyo ahlawule kuba ngumsebenzi wabo. Khumbula, bamele i-ezingundoqo yakho yokusebenza.Zama ukwenza kwabo ndonwabe - musa vumelani kakhulu ziqinile deadlines, kwaye rhoqo ahlawule kwi ixesha. Iqonga: Uphuhliso lomgaqo-site Inyathelo lesi- kwi-ukwenza loluntu womnatha Ke ixesha involve yakho umdwelisi. Ngelishwa, kukho iimeko apho yayo yonke enkulu, kwaye funny guy esabelana ufuna abahlobo, hayi liechtenstein evakalayo kwi-programming. Bakholelwa kuyo okanye hayi, kodwa kuba wonke ingxaki yakho ngu iselwa elula isisombululo. Isiseko yakho loluntu womnatha kukuba uthathe izimvo abanye, kwaye remake kwabo kobakhe indlela. Khumbula ukuba omkhulu abazobi steal. Ke ixesha faka oku philosophical unye kwi senzo. Ukubhala ikhowudi kwi oyithandayo loluntu networks, yongeza eyakho i-logo kwaye ugqibile.Xa ufuna omnye ngabo lazy awunakuba komlinganiselo, uyakwazi nje sebenzisa clone isikhokelo Facebook. Inyathelo lesi Ukwazisa kwiwebhusayithi inyathelo lesi- xa ufuna ukwenza i-loluntu womnatha Emva ngempumelelo cloning oyithandayo loluntu womnatha, okanye emva siphuhlisa kwezabo faka ikhowudi, ixesha iwebhusayithi ukwazisa. Get-a-web ukusingatha bhalisa yommandla igama qala ukukhuphela imifanekiso. Yonke inkqubo kuthatha yure okanye ezimbini. Ngoko ke, iwebhusayithi yakho unako ukukhonza eziliqela yezigidi iphepha izimvo, kwaye ukusukela ukuba oku kungumsebenzi a loluntu womnatha - kuyimfuneko ukuba phantse kwindawo yokuqala. Inyathelo lesi Hlala emva kwaye linda onenzuzo Inyathelo lesi- kwi-yenza loluntu womnatha Msinyane yakho zothungelwano loluntu liza kuphehlelelwa kwaye izigidi amatsha abasebenzisi uza kuqalisa safika ukususela mhla namhla, ke ixesha ukwenza.
Ukufaka nge izibhengezo.
Abantu bamele kuyanqaphazekaarely ngokuchasene yolawulo yangasese okanye izibhengezo. Ucinga ukuba Zuckerberg made billions. Ngokungafaniyo Zuckerberg, nangona kunjalo, kuya kufuneka ukusebenzisa zonke iintlobo izibhengezo: pop-UPS, amalaphu anomyalezo, contextual izibhengezo, njalo njalo.
Oku kuya kukunceda ukuqinisekisa ukuba site ityhila yayo epheleleyo kwezo meko.
Kuya kanjalo ukuphucula ubudlelwane kunye iwebhusayithi yakho, njengoko kuya kuvumela abasebenzisi fumana into entsha: iimvavanyo, kwaye free iisampula ka-iimveliso kuba umlinganiselo ilahleko. Msinyane ukuqala i-kubonwe indlela, uyakwazi ukuhlala emva kwaye kuqwalasela indlela yakho abasebenzisi ingaba uvuma kunye zakho zokusebenza, imali falling yakho engagqibekangacomment. Inyathelo lesi Uthengise yakho kwiwebhusayithi Inyathelo lesi- ukwenza i-loluntu womnatha ke ixesha kuyo Xa ukhethe i-ukutya inani visitors kwaye advertisers ukusuka jikelele ehlabathini, uza kakhulu mhlawumbi ubuso ingxaki ka-declining profits. Ngeli iqonga kubalulekile hayi panic - emva zonke, lo mzuzu kuwe anayithathela sele ukulinda. Ke ixesha kuyo yakho kwiwebhusayithi ye-inkampani ukuba ingaba gcina kuye aphile. Kuya kuba iselwa a kunzima isigqibo, kodwa yakho, mhlawumbi bekuya kuba ngcono kakhulu ukuba sithengise i-site of inkampani ukuba sele yamiselwa ngokwalo kule meko.
Ngaphezu koko, kuyimfuneko ukuba marko kwi-i-mali ingabi ngaphantsi kune $ million. Inyathelo: umhlalaphantsi Xa ufumana yakho ukhangele digits, ixesha kuza kuphumla.
Yokugqibela ezintandathu zithe nzima kakhulu kuba nawe, kwaye ngoku ubuya get bubonke ezi iimeko kwaye umsebenzi. Ukufumana eyakho Iparadesi kulo tropical amazwe. Ebahamas, indoda nomfazi, Thailand kwi end. Khetha indawo ngokwakhe, sithenge indlu yi-ocean, kwaye equip emakhayeni abo kunye imihla technology. Kunjalo, musa xana ukuthenga i-yacht nabalandeli iimoto. Ngeli iqonga ubomi bakho uza kuba ezinye iingxaki - yintoni lemveliso ye car ukukhetha.
Ndifuna ukuba Abe kwi Dating site.
Tanışlıq Və kişi: Pulsuz qeydiyyat.
Dating abafazi Chatroulette ngaphandle ubhaliso iwebhusayithi ividiyo Dating omdala Dating videos ka-girls ividiyo ukuncokola nge-girls roulette ividiyo incoko kubekho inkqubela ividiyo Dating-intanethi akukho ubhaliso free ividiyo ukuncokola nge-girls ubhaliso esisicwangciso-mibuzo ividiyo-intanethi kuba free ngaphandle ubhaliso bukela ividiyo familiarity